CNC Turning (2-12 Sekaiichi) - K-Tek machine Machining Co., Ltd.
Nemazvo zvokuimba zvikamu kugadzira
Machine Zvikamu Kugadziriswa
5 Sekaiichi CNC hwokugaya hwakabvira
CNC hwokugaya hwakabvira (3-4 akabatana)
CNC Yokuchinja (2-12 akabatana)
Nemazvo Zvikamu Kugadziriswa
Pedzisa & Kupisa Kurapa
Hardware Zvikamu Kugadziriswa
Zvishandiso Zvikamu Kugadziriswa
Chii chatinogona kupa?
K-Tek Precision Machining Inopa CNC yekushandura michina zvikamu zvine kusimba kwazvo kushivirira. Iyo mbichana yezvinhu zvakapoteredzwa mabara inogona kugadzirwa kubva 1mm kusvika 300mm. Se ISO9001: 2015 uye ISO / TS 16949: 2009 yakanyoreswa CNC zvikamu zvekugadzira kambani, isu hatingotarise chete pakugadzira asi zvakare nekupa mhando yakanaka CNC inoshandura zvikamu.
Hazvina mhosva kuti zvigadzirwa zvakaomarara sei kana kuti zvakakura sei, mainjiniya edu ane hunyanzvi anokwanisa kuzvigadzira nenzira imwechete uye nemhando. Zvese zvaunotarisira kubva kune ichangoburwa CNC Turning muchina inogona kuitwa neK-Tek Machining Co, Ltd.
Nekushandisa yazvino CNC Turning Technology, inogadzira ine yakanyanya kushandisa michina, mutsauko unogona kuderedzwa uye kudzorwa kunzvimbo dziri kure.
Chii chinonzi CNC Turning?
CNC inodzorwa nekombuta, yakashongedzwa nemuchina wekushandisa muchina wekutonga system. Round zvinhu zvinoitirwa mukati chuck uye kutenderedzwa kubvisa zvinhu kuti zviwane zvinhu. CNC kutendeuka kwete chete kunogona kuburitsa yekunze denderedzwa, zvakare inogona kushandiswa kune yemukati denderedzwa (kureva., Kuchera) chubhu kuwana akasiyana maumbirwo.
Isu tine CNC yekushandura michina kune ese madiki uye makuru vhoriyamu kugadzirwa nekwanisi yekuburitsa yakakwira chaiyo zvikamu kubva ku1mm dhayamita kusvika 300mm dhayamita. Mazhinji emachina edu ekushandura eCCC akagadzirwa neshinda yekuwedzera uye maturusi ekugonesa otomatiki machining ezvikamu zvakaoma mune imwe nzira yekubvisa kubata kunodhura.
• Kutenderera uye kunyatsogadzirisa kunogona kusvika kune +/- 0.005mm
• Kuomarara kwepamusoro kunogona kusvika kuRa0.4.
• Dhayamita yezvinhu zvakasvibirira mabara kutenderera kubva pa1mm kusvika 300mm
• CNC kutendeuka, kutendeuka-uye-kugaya akawanda machining
Alloy steels, Stainless simbi, Brass, Aluminium uye mapurasitiki.
Diki uye hombe vhoriyamu batch.
K-Tek inogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, otomatiki, mota, zvekurapa, simba nyowani nedzimwe nzvimbo. Takapfuura iyo ISO9001: 2015 certification, parizvino tine vashandi mazana maviri. Chigadzirwa yedu 20% aivigirwa kuJapan, 60% aivigirwa kuna Europe uye America, tinogona kukupa yepamusoro uye yemakwikwi mutengo. Zvinhu zvedu zvakajairika isimbi isina chinhu, aruminiyamu, mhangura, yakaderera kabhoni simbi, mapurasitiki enjiniya uye mamwe marudzi esimbi simbi, Tinogona zvakare kupa kupisa kurapwa uye kwakasiyana kwepamusoro kurapwa kwevatengi:
Yedu yekugadzirisa masevhisi anosanganisira:
1) 5 Sekaiichi CNC machine / CNC hwokugaya hwakabvira / CNC Turning；
2) EDM Kucheka waya / WEDM-HS / WEDM-LS；
3) Kugaya / Kutendeuka / Kukuya.
Yedu yepamusoro kurapwa inosanganisira:
Nemazvo simbi kupedza:
Anodize (Zvakajairika / Zvakaomarara)
Zinc yakanamirwa pamifananidzo (Nhema / Olive / Bhuruu /……)
• Kemikari Shanduko Yekupfeka
Passivation (Simbi isina simbi)
• Chrome Kuisa (Inc.Hard)
• Sirivha / Goridhe ra
• jecha nenyunje / upfu spraying / Galvanizing
• Electro makorari / Tin- ra / nhema / PVD nezvimwe.
Nyanzvi mune nemazvo michina zvikamu kugadzira uye yapfuura iyo ISO9001: 2015 certification.
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.
Xinhe Industrial Zone, Wanjiang Ruwa, Dongguan Guta, Guangdong Province, China